जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालयद्वारा भर्ना लिन अस्वीकार, जनकको भविष्य अन्यौलमा – Satyapati
जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालयद्वारा भर्ना लिन अस्वीकार, जनकको भविष्य अन्यौलमा
सुर्खेत । पञ्चपुरीमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले दुई वर्षअघि एकजना विद्यार्थीलाई जन्मदर्ता नभएको भन्दै भर्ना लिन अस्वीकार गरेको छ । वडा नं. ९ तल्लाविजुमा बस्दै आएका जनक माझीलाई दुई वर्षअघि जन्मदर्ता नभएको बताउँदै विद्यालयले कक्षा ९ मा भर्ना नलिएको पाइएको हो ।
उनले आफू जन्मिनु आफ्नो कुनै गलत नभएको बताउँदै निर्वाध रुपमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिनसबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले म १६ वर्षको भएँ । म यहिँ जन्मेको सबै समाजलाई नै थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर मेरो जन्मदर्ता नभएको नाउँमा संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार हनन् भएको छ ।’
टप्प–टप्प आँसु चुहाउँदै कुरा गरिरहेका माझीले आफूलाई समाजले सहयोग नगरेको बताए । ‘म यति निरीह बनेको छु कि कोही कसैले मेरो पक्षमा आवाज नै उठाइ दिएनन्,’ उनले भने, ‘अब कोही छ त मेरा लागि तपाईहरु नै हो । यहाँहरु मार्फत मेरो अध्ययन गर्ने चाहना पूरा होस् ।’
उनले किन पाएनन् जन्मदर्ता ?
उनकी आमा भूमिसरा थापाले आफ्नो गर्भ स्थानीय विष्णु माझीको गर्भ रहेको तर, उसले विवाह नगर्दा बच्चा जन्मिएको बताइन् । ‘सानै उमेरमा मेरो माझीसँग लभ थियो । सोही माया प्रेमका कारण जनक जन्मिएको हो,’ उनले भनिन्, मैले बारम्बार विष्णुलाई फोन गरेर जन्म दर्ता दिलाई दिन आग्रह गरेपनि उसले कहिल्यै कुरा सुन्दैन ।’
‘मलाई नै थाहा नै छैन । आधारहिन रुपमा केहि दिनदेखि गाउँमा प्रचार भइरहेको मैले सुनेको छु,’ माझीले भने, ‘नितान्तरुपमा आरोपित गरिएको हो । यो कुरामा सत्यता छैन ।’ १७ वर्षसम्म उनी कहाँ थिइन् र अहिले मलाई यसरी आरोप लगाइरहेकी छिन्, मलाई केहि थाहा छैन । माझीले यदि प्रमाणित भएको खण्डमा आफू तयार रहेकोसमेत बताए । तर आफूले कोही कसैसँग सम्वन्ध राखेर कसैको भविष्य बर्बाद नपारेको दाबी गरे ।